မြန်မာ့တပ်မတော် ကျောင်းသားများအား နံပါတ်ဒုတ်ဖြင့် အသေရိုက်သတ်ခြင်း
၁၉၈၈ ခု မတ်လ (၁၅) ရက်
မြန်မာ့တပ်မတော် ဘုန်းကြီးများအား အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခြင်း
အောက်တိုဘာလ ၃ရက် ၂၀၀၇
ဖက်စစ်က ပထွေးခေါ်ရသော မြန်မာစစ်တပ်
Labels: အာဏာပိုင်များ The Authorities, အာဏာပိုင်များ The Authorities Child Soldier
မြန်မာနိူင်ငံ ဖာနိူင်ငံ၊ မြန်မာခေါင်းဆောင် ဖာခေါင်းဆောင်
အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် မြန်မာ့တပ်မတော် ခလေးခိုးလျက်
Labels: ကလေးသူခိုး Child Soldier
တပ်မတော်သာသူခိုး၊ တပ်မတော်သာဓမြ၊ ပြည်သူများငတ်ပြတ်မှ တပ်မတော်မြိုဆို့ နိူင်မည်
Labels: ဗိုလ်ချုပ်ကြီး The Generals
Labels: တိုင်းမှူး Regional Commander, ဗိုလ်ချုပ် Maj-Gen
ညစ်ညမ်းခွေ ဘယ်ကထွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာ ကထွက်
မြန်မာနိူင်ငံ၊ ဘာနိူင်ငံ၊ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာ နိူင်ငံ
သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ မြန်မာ့တပ်မတော်
ဘုန်းကြီးဆို သတ်လိုက်ဟဲ့၊ ငါကြွလာရင် ဦးချလှဲ့ 
တစ်အိမ်ထောင် ခြောက်သောင်း ကြံ့ဖွတ် နာမည်ကောင်း
Labels: ရယက Local PDC ကြံ့ ဖွတ် USDA
မြန်မာ့တပ်မတော်ဆောင်ပုဒ် "ကလေးဆို ခိုးလိုက်ဟဲ့၊ မိန်းမဆို ကျင့်လိုက်ဟဲ့"
Labels: အာဏာပိုင်များ The Authorities Child Soldier
Labels: ရဲမှူး police officers
အိုမင်းမစွမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ကလေးခိုးရာတွင်အလွန်ပျော်
ကိုယ့်ဥပဒေ ကိုယ်ရှောင်ပယ် ၆၀ ပြည့်လဲ မနားရဲ
Labels: မယက Township PDC.
ကြံ့ဖွတ်ကိုယုံ မိသဖြင့် လူပမ်းပြီး ငွေကုန်
လပွတ္တာမြေတိုင်း ဦးစီးမှူး ဦးအောင်ကျော်မြင့်
Labels: မြေစာရင်း အရာရှိ Land Surveyor
ဆင်းရဲနုံချာလှသော မြန်မာနိူင်ငံ မှ ကြွယ်ဝချိနဲ့ လှသော ခေါင်းဆောင်
ရန်ညှိုးတကြီးဖြင့် ရှက်ရမ်းရမ်းသော ခလရ ၃၁ တပ်ရင်း
သူခိုး ဦးဥာဏ်ရှိန် (ကြံဝန်ထမ်း)နှင့် မိသားစ
Labels: ဝန်ထမ်း civil servant
တွံတေးဆေးရုံမှ ဆရာဝန် ဒေါ်ဆင့်ဆင့်သီ
Labels: ဆရာဝန် Doctor
ကမ္မ၀ါစာ ကိုင်ဆောင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချသော စစ်အစိုးရ
သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ ကြံဝန်ထမ်း
မြင်းခြံ ကြံ့ဖွံ့အတွင်းရေးမှူး အောင်ကြည်ဝင်း
နေပြည်တော် ရုံးချုပ်ကို ဖင်တုန်အောင်ကြောက်ရသော တရားသူကြီး ဦးအောင်သိန်း
Labels: တရားသူကြီး Judges
ယုတ်မာညစ်စုတ် တရားလိုတက်လုပ်နေသော ဒုရဲအုပ်အောင်ထွန်းသက်
စအဖ သတင်းပေး ရာအိမ်မှူးဦးဝင်းလွင်
ဖာနိူင်ငံ အဖြစ် သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားသော မြန်မာနိူင်ငံ
ကလေးသူခိုး ခွေးသူခိုး မြန်မာ့တပ်မတော် အကျင့်ဆိုး
ရွာသားကိုအသေရိုက်သတ်သော ရဲကြပ်ကြီး ဆန်းဦးနှင့်အဖွဲ့
စစ်အမည်ခံပြီး တိုင်းပြည်ကို အပိုင်ကြံနေသော ဘုန်းကြီးသတ်သမားများ စာရင်း
ဖေါင်တော်ဦး အခြေစိုက် ရေတပ် ကင်းစခန်းမှ ဓါးပြ စခန်းမှူး ဥာဏ်ထွန်း
ဓါးပြ တပ်ကြပ်ကြီး သိန်းဝင်း (အမှတ် ၃၇၃ အမြှောက်တပ်)
Labels: တပ်ကြပ်ကြီှးSergeant
ဘုရားရွှေသူခိုး သန်းရွှေ
အကျင့်ဆိုးသော လူယုတ်မာ ခလရ(၈၃)တပ်ရင်းမှူး နှင့် ဗိုလ်ဇော်မင်းအောင်
Labels: ဗိုလ် Leiutenant
ဒေါသမီးလောင်မြိုက်သော ခမရ ၅၁၇ မှ ဒုတပ် ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး အောင်နိုင်ထူး
နာဂစ်သူခိုး ရယကဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်း
ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော ကြံစိုက်ပျိုးရေးဌာန ဝန်ထမ်းများ နှင့် အာဏာပိုင်များ
Labels: ဝန်ထမ်း civil servant, အာဏာပိုင်များ The Authorities
ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ချသော မြန်မာ့တပ်မတော် (ကလေးသူခိုးတပ်)
အောင်ဆန်း ခလရ ၉၀
ရာထူးတိုးချင်သဖြင့် ကလေးခိုးသော ဗိုလ်ဥာဏ်ဇော်လင်း
ဗိုလ်များပြီး တပ်သားမရှိသော မြန်မာ့တပ်မတော်
ရမခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်သန်းထွဋ်
Labels: တိုင်းမှူး Regional Commander
Labels: စစ်ကြောရေးစခန်း Interrogation
ဦးဝင်းဆွေ၊ လှိုင်မြို့ နယ် တရားသူကြီး
ဖာပွန်အခြေစိုက် ခမရ ၄၃၁
တဏှာရူးသော ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်သောင်း
ကစထအရူး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အုန်းမြင့် နှင့်လိုဘကြီးသော ဇနီးဒေါ်နုနုဆွေ
Labels: ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Lt-Gen
နက်ဝေါ့ နေမျိုးဝေ (မှော်ဘီ)
Labels: စစ်ခွေး Military Dogs
အောင်လင်းဦး (သန်လျင် SB)
လေတပ်ဦးစီးချုပ် မြတ်ဟိန်းရဲ့ ကတော် ဒေါ်ထွေးထွေးညွန့် 
လေတပ်ဦးစီးချုပ် မြတ်ဟိန်း သား စိုင်းစိုင်း
ကြံ့ဖွတ်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး
ပက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော ခမရ ၅၁၈ တပ်ရင်း ဒု - ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူ
Labels: ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Lt Col
ရာပြည့် အုပ်ချုပ်သော တိရစ္ဆာန် တပ်များ
တောင်ကြီးအခြေစိုက် အရှေ့ပိုင်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည့်
လဲချား ခလရ ၆၄ နှင့် ခမရ ၅၁၅ ၊
လွိုင်လင် ခလရ ၉ နှင့် ၁၂ ၊
မိုင်းကိုင် ခမရ ၅၁၃ ၊ ၅၁၅ ၊ ၅၁၈
ဆင်သေပုပ်စော် တလှောင်းလှောင်းထနေသော နိုင်ငံများ
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှ မွေးထုတ်လိုက်သည့် အဟာရချို့ တဲ့၊ ချိနဲ့ နုံချာ ဆင်းရဲမွဲတေလှပါသော မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ
လူသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်သော သူရဲဘော ဗိုလ်ကြီး ဇော်မင်းကျော်၊ စစ်ကြောရေးအမှတ် ၁
Labels: ဗိုလ်ကြီး Captain
လူသတ်ပြီးအလောင်းဖျောက်သောသူရဲဘော ဗိုလ်ကြီး စိုင်းအောင်ဝင်း၊ စစ်ကြောရေးအမှတ်(၁)
လူသတ်ပြီးအလောင်းဖျောက်သောသူရဲဘော ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းလှိုင၊် စစ်ကြောရေး အမှတ် (၁)
တရုတ်ကဖိ၊ ရှမ်းက အိ၊ နအဖကြွက်တွင်းတူးပါ၏
အမြှောက် တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စိုးမြင့်
Labels: ဗိုလ်မှူးချုပ် Brig-Gen
Labels: ရယက Local PDC
Labels: အာဏာပိုင်များ The Authorities, ထောင်ပိုင် Prison Warden
နိူင်ငံသားများကို ညှင်းပမ်းနှိ်ပ်စက်သော ရန်ကုန်တိုင်းထောက်လှမ်းရေး
ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသော နိူင်ငံတော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မှဝန်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မြေး၊ ထွန်းနိုင်ရွှေရဲ့ သားကျော်ကျော် ISY ကျောင်းတက်
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို ၏ သား ISY ကျောင်းတက်
Labels: ဗိုလ်ချုပ် Maj-Gen
US$ 10သန်းကျော်တန်ကျောင်းကိုပိုင်သောအောင်သောင်းသား နေအောင်
ရယက ဥက္ကဌ ဦးညီညီလွင် (မြောက်ဥက္ကလာပ)
ဦးဝင်းချို ရ.ယ.က လူကြီးဟောင်း(မြောက်ဥက္ကလာပ)
မြောက်ဥက္ကလာ ရဲတပ်သား ပန်းသီး (ခေါ်) အောင်အောင်ဦး
အကြင်နာကြီးသော ရထားဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်မင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒုတိယတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း
မိုင်းနောင် အခြေစိုက် အမှတ် ၂ စကခ မှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဇံမြင့်
Labels: တိုင်းမှူး Regional Commander, ဗိုလ်မှူးကြီး Colonel
တောင်ကြီးအခြေ စိုက် ရပခ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်
စစ်ရေးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် (ယခုနအဖ၀န်ကြီးချုပ်)
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးအခြေစိုက် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ အင်အား ခြေလျင်ခြေမြန်တပ်ရင်း ၄၆ ရင်း၊ ထောက်ပို့တပ် ၈ ရင်း၊ အမြောက်တပ် ၁၁ ရင်း၊ သံချပ်ကာတပ် ၁ ရင်း နှင့် တင့်ကား တပ်ရင်း ၁ ရင်းရှိသည်ဟုဆို၏။
Labels: တိုင်းမှူး Regional Commander, အာဏာပိုင်များ The Authorities
အမှတ် (၉၉) တပ်မဌာနချုပ်
အောင်သပြေ စစ်ကြောရေးမှ အောင်ဆန်းမြင့်
Labels: စစ်ကြောရေးစခန်း Interrogation, ထောင်ပိုင် Prison Warden
ကမာရွတ် ရဲစခန်း ဒု-ရဲအုပ်ဆန်းဦး
အမှတ် ၆ သကြားစက်ဝန်ထမ်း ကိုသန်းညွန့် 
သမ၀ါယမ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွဋ် နှင့် ဇနီး မနီ
မပခ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘ
ဒုတပ်ချုပ်ရဲ့ P.A ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဘိုဝင်းထွန်း
Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement Major-General Maung Maung Swe.
ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်ဆွေ အား အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ်
ပုံပါကျင်အခြေစိုက် မိုင်းတုံစစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဝင်းဦး
ကွန်ဟိန်း-တာ့ကော့် အခြေစိုက် ခလရ ၂၉၆ ဗိုလ်မှူးကျော်ဝင်းနိုင်
မိုးနဲအခြေစိုက် ခလရ ၂၄၈ တပ်ခွဲ ၂ စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ထွန်း
ထို့ပြင် မော်လမြိုင်မြို့၌လည်း သံဃာတော်များက သပိတ်မှောက် ကံဆောင်လိုက်ကြကြောင်း သိရသည်။
တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ပွဲ (အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် သီရိလင်္ကာ)
စစ်အစိုးရက သံဃာထုကို ၀န်ချတောင်းပန်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့် နေ့ ယနေ့တွင် အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် သီရိလင်္ကာမှ သံဃာတော်များ တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ပွဲ ကျင်းပသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
တတိယ အကြိမ်မြောက် ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင်ပွဲ (သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု)
တတိယ အကြိမ်မြောက် ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင်ပွဲ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်တွေ)
မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် (ဘင်္ဂလာဌာန)က တတိယ အကြိမ်မြောက် ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင်မှု ပြုလုပ်
(ဓာတ်ပုံ - အောက်တိုဘာ ၃ ရက် ညနေ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားဝင်း၊ သိမ်တော်ကြီးအတွင်းမှာ သံဃာတော်များ စုဝေးနေတာကို တွေ့ရစဉ် - ဓာတ်ပုံ မိုးမခ)
ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေတွင် မြန်မာသံဃာတော်တို့ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်
အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၀၉
တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲအဖြစ် ပြည်တွင်းရှိ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးက ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့် ပဝါရဏာနေ့မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
ကွန်ဂို မြန်မာ မုဒိန်းကောင် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ
တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်မှု
သံဃာတော် အနည်းဆုံး ၄ ပါးခန့်က သိမ်ကျောင်းဆောင်အတွင်း၌ ကမ္မဝါ စာရွတ်ဆိုပြီး တမ္ဘာလုံးရှိ သံဃာတော်များ အား အကြောင်းကြား လိုက်လျှင် သံဃာများက ပြုသည့်ကံ ဖြစ်သောကြောင့် သံဃာမှန်သမျှ လေးစားလိုက်နာ ရကြောင်းနှင့် မလိုက်နာပါက သံဃာဝိနည်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ ဝိနည်းတော်ကို ချိုးဖောက်ရာကျကြောင်း သံဃာတော်များက မိန့်သည်။
လာမည့် တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်မှုကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဓမ္မဝံသက မိန့်ကြားသည်။
“ကံမြောက်မှာပါ။ ၃ ရက်နေ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့မှာ ဦးဇင်းတို့က သိမ်တခုထဲမှာ သွားပြီးတော့ ကမ္မဝါစာ ပြုတဲ့အချိန်မှာ သံဃာတွေက သမဂ္ဂီဖြစ်နေတာ။ အားလုံးက စုစုစည်းစည်း၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကမ္မဝါ ညှပ်တယ်ဆိုတော့ ကံမြောက်နိုင်တယ်။ လူတွေ ထင်နေတာက အရင်စက်တင်ဘာလို လုပ်မယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲဒီပုံစံတော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးဓမ္မဝံသက မဇ္ဈိမကို မိန့်သည်။
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးသောင်း
အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တစ်လ ကလေး ၂ ယောက်ခိုး
နေပူကြဲထဲ ထီးမိုး မခံရရှာသော ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်
Labels: ရှေ့ နေ Lawyers
စစ်အရာရှိများပိုင်ဆိုင်သော အနှိပ်ခန်းများ (ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ဖာနိူင်ငံ)
အစိုးရ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင်
Labels: သစ်တော Forestry
ကချင်ကြံ့ဖွတ် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်
Labels: ကလေးသူခိုး Child Soldier, ရဲမှူး police officers
ရေတပ် ပင်မပစ္စည်း ထိမ်းသိမ်းရေးတပ်
Labels: ကလေးသူခိုး Child Soldier, တပ်ကြပ် Corporal
အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး နှင့် ဟိုတယ် ပိုင်ရှင်
ပေါင်းတည်ထောင်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄ ဦး ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
ကျော်ကျော် (NLD ဒေါပုံ လူငယ် တာဝန်ခံ) ထောင်ဒဏ် ၁၃နှစ်။
ဇင်လင်းအောင် (ကျောင်းသား) ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ်ခွဲ။
ကြည်ကြည်ဝါ (NLD တနင်္သာရီတိုင်း လူငယ်) ထောင် ၁၁နှစ်။
မာမာအေး (ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်) ၂ နှစ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဝင်း
Labels: ထောင်ပိုင် Prison Warden
ကိုဇာကနာ၊ ကိုလှမျိုးနောင် အပါအဝင် ၁၈ ဦး ကျန်နေပါသေးသည်။
နစက ဒု ဌာနမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ဦး (ခင်ညွန့်ခောတ်)
နစက ဌာနချုပ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ငွေ (ခင်ညွန့်ခောတ်)
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲတွင် ဦးအိသရိယ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ဦးခင်လှ (တောင်ကုတ် NLD ဒုဥက္ကဌ)၊ ကိုမိုးနေစိုး၊ မနီနီမေမြှင့်၊ ကိုမောင်မောင်သက် အစရှိသည့် နိုင်ငံရေး သမား ၂၁ ဦးရှိသည်။
ဂျိုးဖြူအမှတ် ၁ တပ်မတော်တန်းမြင့် ကလေးသူခိုးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းရဲ့ ညီ ဗိုက်ကြီးအောင်မြင့်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း နှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်လေးသက်
စစ်အစိုးရ ပြန်လွှတ်ပေးသူများထဲတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄၃ ဦးသာ ပါဝင်
ဤသူများ ထောင်မှမလွတ် သရွေ့ မြန်မာပြည်မွဲတေစုတ်ချာနေမြဲဖြစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူး (ဟောင်း) ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင် (ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိူင်ငံ)
ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူး ရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်သူ (ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိူင်ငံ)
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် အမှတ် (၇) စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့်
ပြည်သူ့ အကျိုးပြုပါတီဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ငန်းဖေါ်ဆောင်မှုကော်မတီ
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၂ဝ၄)၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တိုင်းသူပြည်သား များကို လည်မျိုနင်း၊ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး မြောင်းထဲပစ်ချ မယ် လို့ ဘီလူးသဘက်မိစ္ဆာ ကြီး ကြံ့ဖွတ် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ လျှပ်စစ် ၁ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း က ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုပါတယ်။
Labels: ဒုတိုင်းမှူး Dep. Re.Commanders
ခမရ ၃၅၆ စစ်ကြောင်း ၁ ၊တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မိုးဟိန်း
အနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာအနီး လွှတ်ရှမ်း၌ အခြေပြုလျှက်ရှိသည်။
ခမရ ၃၅၆ စစ်ကြောင်း ၂ ၊ ဒုရင်းမှူးဗိုလ်မှူး အောင်မိုးမြင့်
အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာချုပ် တိုင်းမှူးးဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း
ဓနုဖြူ မယကဥက္ကဌ (ယခုဒဂုံမြို့ သစ်မြောက်ပိုင်း)ဦးတင့်လွင်
မန္တလေးမြို့ တော်ဝန် ဘုန်းဇော်ဟန်၊ စည်ပင်သာယာ ဈေးဌာနခွဲမှူး သက်နိုင်
Labels: စည်ပင်သာယာ municipal, မြို့ တော်ဝန် Mayor
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပျဉ်ပုံကြီးကျေးရွာအနီး အမှတ် (၇) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ တပ်သား အောင်မြတ်သူ
Labels: ခမရ, ခလရ LIB
Labels: ခလရ LIB
ရဲမှူးချုပ် စိုးဝင်းမြင့်နှင့် ဒုတိယရဲမှူးချုပ် ဇော်ဝင်း
စစ်ကြောရေးစခန်းမှ ရဲအုပ် ကျော်စိန်နှင့် ဒုရဲအုပ် ပြည်ခိုင်ဇော်
Labels: စည်ပင်သာယာ municipal
တွံတေးမြို့နယ် မယကဥက္ကဌ ဦးအောင်စံသာ ဦးစီးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ အင်အား ၅၀ ခန့်ရှိပြီး ရဲသတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့(စရဖ)များ ပါဝင်ပြီး နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဝင်းထွဋ်ထွဋ်ဦးမှာ အရက်သေစာ သောက်စားထားကာ ထိုးကြိတ်မည်အထိ နှောင့်ယှက်ရမ်းကားခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
"ဘုရားလည်းရောက်ပြီးတော့ အင်္ဂါဒေါင့်မှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်၊ ဘုရားကို တပတ်ပတ်တယ်၊ ရှင်ဥပ္ပဂုတ္တမကန်မှာ ကုသိုလ်အဖြစ် ငါးစာကျွေးတယ်၊ ငါးစာကျွေးပြီး ပြန်အတက်မှာ ရဲအဖွဲ့က နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဝင်းထွဋ်ထွဋ်ဦးနဲ့ ဒုတပ်ကြပ် စိုးဝင်းအောင်တို့က ပြဿနာရှာပြီးတော့ ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်၊ ချက်ခြင်း မင်းတို့ ဘုရားပေါ်ကဆင်း၊ မဆင်းရင် ဖမ်းမယ်ဆိုပြီး ဟန့်တားနှောင့်ယှက်တယ်၊ အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တယ်”
ချင်းမိုင်၊ နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ရန်ကုန်အခြေစိုက် Phoenix ဂျာနယ်အား စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်သည် ဟုဆိုကာ စာပေစိစစ်ရေးဌာနက သြဂုတ်လ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
Labels: ညွှန်ကြားရေးမှူး Director
Labels: တပ်ရင်းမှူး Commander, ဗိုလ်ချုပ် Maj-Gen
နိူင်ရာဖိကြိမ်းသော ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဇော် Lt-Col Kin Zaw
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတွင် ရေထဲမှ ဆယ်ယူရရှိသော အမည်မသိ အလောင်း တလောင်းအား စစ်ထောက်လှမ်းရေး စရဖမှ အစအန မပေါ်ရအောင် ဖျောက်ဖျက် ပစ်လိုက်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Labels: Cowards, အာဏာပိုင်များ The Authorities
August 15,5pm Chobin Gauk, Bago
Mar Mar Aye, 46, member of NLD Party was taken from home by3police officers and another man. They told her that the chairman of the Township PDC wanted to see her. Mar Mar Aye had apparently been seen talking toamonk inateashop,afew days earlier.
August 16,2pm
A police officer came to search the house of Mar Mar Aye and confiscatedajacket withaDaw Aung San Suu Kyi sticker andacopy of the Human Rights press release by United Nations.
August 17,2pm Zeegone Court
Mar Mar Aye was accused ofapolitical act (action 5/nya - j) and sentenced to3years with hard labour.
Deputy Police Officer Tun Kyi and Police Sargeant Thein Lwin, Zeegone Police Station
They drove Mar Mar Aye, who fainted in the court room, to Zeegone Hospital, where she was treated for 25 minutes.
August 17 , 2:45 pm
Mar Mar Aye was taken inapolice car to Paung Dair prison.
U Win Aung, In-Charge, Zeegone Police Station
He denied the police involvement in transporting Mar Mar Aye (to prison).
Her family members did not know anything about the court hearing , sentencing or her whereabouts. She has one son who is 11.
When the family members went to Paung Dair prison to look for her, they were told that she wasn't there.
Mar Mar Aye's 80 year old mother is desperately trying to locate her daughter.
လွတ်လပ်မှုကို တောင်းဆိုတာနဲ့ ပဲ
ပြည်သူ့ အတွက် တရားပျက်၍
အမှားမြင်သူ တရားရှင်တို့ က
တွန်းလှန်မယ် ဟေ့ ။
(ကျောက်ပန်းတောင်း မှ အညတရ ကဗျာရှင်)
"အတွင်းရေးမှူးတို့ ဥက္ကဌတို့ လုပ်တဲ့သူတွေက သူတို့ အဓိကလုပ်တာ၊ ရိုက်ဖို့ သူတို့အမိန့်ပေးတယ်၊ ခု ကိုထွန်းထွန်းကိုယ်တိုင်လည်း ကမ်းနားမှာ စဖြစ်တုန်းက ပါးရိုက်တာတွေ ရှိတယ်၊ အခုဖြစ်စဉ်မှာက အတွင်းရေးမှူးတွေက ၀ိတ်အား၊ ငွေအားနဲ့ ဘေးဖယ်ထွက်နေပြီး ရာအိမ်မှူး ကိုထွန်းထွန်းကို အမှုအကုန်လုံး ပုံချထားတယ်” ဟု ဒေသခံက ပြောသည်။
Labels: Corruption, Cowards, အာဏာပိုင်များ The Authorities
စစ်သားစုဆောင်းရေးမှ ကလေးငယ်အား မိဘများက ငွေပေး၍ ပြန်လည်ထုတ်ယူခဲ့ရ
Sunday, 23 August 2009 21:20 ဗထူး
စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံရသည့် ဘိုကလေးမြို့မှ ကျောင်းတက်နေသူ ကလေးငယ်အား မိဘများက စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်မှ ငွေပေးကာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခဲ့ရသည်။
တွံတေးမြို့နယ်ဆုတောင်းပွဲ ပြည်သူထောင်နှင့်ချီ လာရောက်ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့
Wednesday, 19 August 2009 18:00 ရိုးမ ၃
တွံတေးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီဝင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အဖြူရောင်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ကာ ယနေ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ရာ ပြည်သူလူထု ထောင်နှင့်ချီ၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအား နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ (NLD)ပါတီဝင်များက တွံတေးမြို့ပေါ်ရှိ ရွှေဆံတော်ဘုရား အင်္ဂါဒေါင့်တွင် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကို ယနေ့ နေ့လည်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များကလည်း တွံတေးမြို့ပေါ်တွင် လုံခြုံရေးများ ထူထပ်စွာ ချထားပြီး အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
“လုံခြုံရေးကတော့ ဘုရားအောက်မှာတွေ၊ မြို့ထဲမှာတွေကော နောက်ပြီးတော့ ဘုရားအပေါ်မှာလည်း ချထားတယ်၊ လုံခြုံရေးကတော့ တော်တော်များတယ်ဗျ၊ ရဲတွေပါ၊ ဒါပေမဲ့ ယူနီဖောင်းတွေတော့ မပါဘူး၊ ရဲသတင်းပေးတွေလည်း များတယ်၊ ဒီနေ့တော့ ဝိုင်းစောင့်ကြည့်တာတွေ ဗွီဒီယိုရိုတာတွေပဲ ရှိတယ်၊ ဒီနေ့လာတဲ့ ပြည်သူလူထုအများအားဖြင့်ကတော့ အင်္ဂါဒေါင့်မှာပဲ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်” ဟု အင်န်အယ်ဒီပါတီ တွဲဘက်အတွင်း ရေးမှူး ကိုဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ယနေ့သည် ဝါခေါင်လကွယ် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုများက အဖြူရောင်များဝတ်ဆင်ကာ ဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ရာတွင် အများစုမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး အင်အား ၃,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ယနေ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ကာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ကို တွံတေးမြို့နယ် (NLD)ပါတီအဖွဲ့ဝင်အချို့က ယခင်ရက်များတွင် ပြည်သူများအကြား လိုက်လံပြောဆိုထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
"မနေ့ကလည်း ကျနော်တို့ ရဲတွေနဲ့ ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူက သိတယ်၊ ဒီနေ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူတို့က ဥပုသ်လာစောင့်ရင်းနဲ့ ဒီ လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကို ဝိုင်းကာကွယ်မယ်ဆိုပြီး လာကြတာပါ၊ ဥပုသ်နေ့တိုင်းမှာ ဒီလို လူအများကြီး ဘုရားပေါ်မတက်ဘူး၊ နည်းနည်းလောက်ပဲ တက်တာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလောက်ပဲ သွားကြတာ၊ ခုက ဘုရားပေါ်ကို အများကြီးတက်လာတယ်” ဟု ကိုဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထပ်မံချထားခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထောင်ချောက်ဆင်မှုသာဖြစ်သဖြင့် တွံတေးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် အဓိကတရားခံ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဂျွန် ယက်တောအား စစ်အစိုးရက ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုဇော်မင်းထွန်းက “နိုင်ငံခြားသားကိုတော့ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ လွှတ်ပေးနိုင်တယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့ သဘောထားမကြီးဘဲနဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားတယ်၊ ထောင်ချတယ်၊ ခုလို အဖြူရောင် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ရိုက်နှက်တယ်၊ ကျနော်တို့ကတော့ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီရတဲ့အထိ တွံတေးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
Labels: Cowards, Heroes
၀ီရ / ၁၈ သြဂုတ် ၂၀၀၉
“ကိုယ့်မြို့မှာ စာကပ်ဆေးဖြန်းတာတို့၊ ဆန္ဒပြတာတို့ စတဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာရင် မြို့ခံအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေကို အရေးယူမယ်တဲ့။ အဲဒီလိုဖြစ်တာကို အချိန်မီအစီရင်ခံမတင်နိုင်လို့၊ ဖမ်းလို့မမိဘူးဆိုရင် တာဝန်ကျတဲ့သူသာမက အဲဒီအဖွဲ့က အားလုံးထိမယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ ရဲနဲ့စစ်တပ် အတူဦးဆောင်ရမယ်။ အဓိကကတော့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ထူးခြားချက်တွေကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဆီကို အစီရင်ခံစာ နေ့တိုင်းတင်ရမယ်ပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရှိ သံဃာ့နာယကအဖွဲ့သို့ အာဏာပိုင်တို့က သွားရောက်၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် သံဃာတော်အသစ် ရောက်ရှိလာလျှင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရန်နှင့် သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွလျှင် ယပ်တောင်ပါ ယူဆောင်ကြွချီရန် စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည့်လျှောက်ထားစာ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရှိ စာသင်သား (၅၀) ကျော် သီတင်းသုံးနေသည့် စာသင်တိုက်တတိုက်မှ စာချဆရာတော်တပါးက မိန့်ကြားသည်။
“ကိုယ်တော်တွေ အပြင်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွမ်းခံကြွရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယပ်တောင်ပါသွားဖို့။ အခြားနယ်က သံဃာတော်တွေ လာတည်းရင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားဖို့ ပြည်နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ထံကို အာဏာပိုင်တစုက လာလျှောက်ထားတယ်” ဟု အထက်ပါဆရာတော်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ကတည်းက သံဃာတော်များ လမ်းမပေါ်ပြန်ထွက်လှုပ်ရှားမှုများ ပြန်စမည်ဆိုသည့်သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း၊ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှ မနက်အစောကြီးဆွမ်းခံကြွသည့် ကိုယ်တော်များနောက်သို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အာဏာပိုင်များက နောက်မှ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် လိုက်လံကြည့်ရှုမှုများ ရှိလာကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးကလည်း ဖမ်းဆီးထားသော သံဃာတော်များအား လွှတ်ပေးရန်၊ သံဃာတော်များအပေါ် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်စော်ကားမှုများကို စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ပြန်လည်တောင်းပန်ရန်နှင့် မလိုက်နာပါက သီတင်းကျွတ်လပြည့် (၁၅) ရက်၊ (၃-၁၀-၂၀၀၉) တွင် တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင် သပိတ်မှောက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၀၉ ခု သြဂုတ်လ ပထမအပတ်တွင် ချောက်မြို့၌ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး နံရံကပ်စာလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်း (၇) ဦးအား ခရိုင်ရဲမှူးကြီးက (၄) ရက်ကြာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
မင်းနိုင်သူ / ၂၄ သြဂုတ် ၂၀၀၉
ရခိုင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် စစ်တွေမြို့တွင် ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့၏ အထင်ကရ သာသနိက အဆောက်အဦများတွင် လုံခြုံရေးယူထားခြင်းဖြစ်ကာ လုံခြုံရေးယူသည့် ရဲများ သာသနိက အဆောက်အဦများအတွင်း၌ပင် နေထိုင်စားသောက် အလောင်းအစားဝိုင်းများ ထောင်နေခြင်းကြောင့်လည်း ဒေသခံလူထု စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြရကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “လောကနန္ဒာဘုရားကြီးထဲမှာလည်း ရဲတွေလုံခြုံရေးယူထားတာကြာပြီ။ စားတော့၊ သောက်တော့လည်း ဘုရားပေါ်။ နေ့ခင်းဘက် လူနည်းပါးချိန်ဆို လုံခြုံရေးရဲတွေက ဖဲဝိုင်းထောင်ကြနဲ့။ သာသနိကအဆောက်အဦနဲ့ ဘယ်လိုမှကို မသင့်တော်တာ” ဟု ပြောသည်။
စစ်တွေမြို့ရှိ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သော ဦးရဲကျော်သူကျောင်း၊ ၀င်္ကဘာကွင်း၊ အတုလမာန်အောင်ဘုရား၊ လောကနန္ဒာ ဘုရားနှင့် ဦးဥတ္တမပန်းခြံတို့တွင် ရဲများလုံခြုံရေးယူထားသည်မှာ တလကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“အခုရက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံရေးအင်အားတိုးလာတယ်။ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည်နီးလာလို့ ထင်တယ်။ တဘက်က လုံခြုံရေးအင်အားတိုးချထားသလို တဘက်ကလည်း တိုင်းမှူးက မြို့ထဲရပ်ကွက် (၄) ရပ်ကွက်ကို (၂၄) နာရီ မီးပေးမယ်ဆိုပြီး စည်းရုံးနေတယ်” ဟု အဆိုပါစစ်တွေမြို့ခံက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဥဒါန်း၊ ပြည်တော်သာ၊ ပလုတ်တောင်စသည့် မြို့တွင်းပိုင်းကျသည့် ရပ်ကွက်များတွင် လျှပ်စစ်မီး (၂၄) နာရီ ရယူလိုသူများအား စာရင်းကောက်ယူနေသော်လည်း မည်သည့်နေ့တွင် (၂၄) နာရီ မီးစရမည်ကိုမူ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက မပြောနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“လျှပ်စစ်မီးရမယ်ဆိုမှတော့ လူတိုင်းလိုချင်တာပေါ့။ စာရင်းတောင် ကောက်နေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး စာရင်းတောင်းယူတယ်” ဟု မြို့ခံက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင်၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းအပြီး စစ်တွေမြို့မှ သံဃာတော်များက ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုကြောင့် စစ်အာဏာပိုင်များက စစ်တွေမြို့ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်ဟု စစ်တွေမှ သံဃာတော်တပါးက မိန့်သည်။
“တဘက်က ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြဖို့ ရထားလမ်းဖောက်တာတွေ၊ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တာတွေ၊ သတင်းစာတိုက်ခွဲ လာလုပ်ပေးတာတွေနဲ့ စည်းရုံးရေးလုပ်နေတယ်။ တဘက်ကလည်း လုံခြုံရေးကို တိုးချထားတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ ဒေသခံလူထုက ဆင်းရဲကျပ်တည်းဆဲပဲ။ ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေဆဲပဲ” ဟု အထက်ပါသံဃာက ဆက်လက်မိန့်ဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့ လုံခြုံရေးကို ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း ပိုမိုတင်းကျပ်ထားရာ အခြားမြို့များမှ စစ်တွေမြို့သို့ လာရောက်သည့် ကားများ ညနေ (၆) နာရီကျော်လျှင် စစ်တွေမြို့တွင်း ၀င်ခွင့်မရဘဲ မြို့ပြင်မှာသာ အိပ်ကြရကြောင်း၊ စစ်တွေမြို့သို့ လာရောက်သည့် ရဟန်းသံဃာများကိုလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု များပြားနေကြောင်း သိရသည်။
လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများကို အရှက်ကင်းမဲ့စွာပစ်သတ်ရဲသော မြန်မာ့တပ်မတော်သားများ
ရှမ်းပြည် (အလယ်ပိုင်း) ရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၄၀ ခန့်အား ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းတွင် ဒေသတွင်း အခြေစိုက် စစ်တပ်များက မီးရှို့ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခြင်းကြောင့် ဒေသခံ ရွာသား တသောင်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
''လဲချားမြို့နယ် တတ်မောက် ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ဝမ်ဟိုလွန်၊ ကွန်ဟုန်း၊ မောက်စမ်ရွာတွေလည်း ပါတယ်။ ရွာ ၁ဝ ရွာမီးရှို့ပြီးတော့ ကျန်ရွာ ၃ဝ လောက်ကို အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတယ်။ လူပေါင်း တသောင်းကျော်လောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကုန်တယ်’’ ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (Shan Human Rights Foundation) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခမ်ဟမ်ဖ (Kham Harn Fah) က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် ရှမ်းအမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူမှုကူညီရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး စသည့် ရှမ်းအဖွဲ့အစည်း ၆ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သူ ဦးစိုင်းခူစမ် (Sai Khur Hseng) က ‘‘ရွာသားတယောက် ပြန်ပြောပြတာက ရွာကို မီးရှို့နေတဲ့အချိန် စစ်ဗိုလ်က စကားပြောစက်နဲ့ အိမ်ဘယ်လောက် မီးရှို့ပြီးပြီဆိုတာ သတင်းပို့နေတယ်။ အထက်က မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတော့ မီးထပ်ရှို့တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် သူတို့ စနစ်တကျနဲ့လုပ်တာ ထင်ရှားနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
စဗခ ၂ လက်အောက်ရှိ လွယ်လင် အခြေစိုက် ခြေလျင်တပ်ရင်း - ခလရ ၉ ၊ ခလရ ၁၂ ၊ လဲချားအခြေစိုက် ခလရ ၆၄ ၊ ခြေမြန်တပ်ရင်း - ခမရ ၅၁၅ ၊ မိုးနဲအခြေစိုက် ခမရ ၂၄၈ နှင့် ခမရ ၅၁၃၊ ခမရ ၅၁၄ က ယခုလို မီးရှို့ခြင်းနှင့် နေအိမ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းဖြစ်ရပ် ၃ ရက်ကြာ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း လူသေဆုံးမှုများလည်း ရှိကြောင်း သူက ဆိုသည်။
‘‘တတ်မောက်ကျေးရွာ အုပ်စုထဲကပဲ ရွာသား ၃ ဦး မြန်မာစစ်တပ်က ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်။ နောက် အမျိုးသမီးတဦးက သူ့အိမ်ကို မီးရှို့နေတုန်း အိမ်ထဲကို ပစ္စည်းဝင်ယူတဲ့အတွက် သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး အိမ်သာကျင်းထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သတင်း ရတယ်ခင်ဗျ။ အမျိုးသား ၃ ယောက်ကတော့ သေတယ်။ အမျိုးသမီးကတော့ သေသလား၊ ရှင်သလား မသိရသေးဘူးခင်ဗျ’’ ဟု သူက ပြောသည်။
နေအိမ်များ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည့် ဒေသခံအချို့သည် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဆွေမျိုးများထံတွင် သွားရောက် ခိုလှုံနေရပြီး အချို့မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။
ယခု အဖြစ်အပျက်သည် ၁၉၉၆-၉၈ ခုနှစ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းမှ လူပေါင်း ၃ သိန်းကျော် နေအိမ်များ အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ၅ နှစ်အကြာတွင် ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ နောက်တဖန် ယခုလို ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခင်တကြိမ်နောက်ပိုင်း အကြီးမားဆုံး လူနေအိမ် ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမှုလည်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့က ရှမ်းအဖွဲ့အစည်း ၆ ဖွဲ့ ပူးပေါင်း၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ်ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ အရပ်သားများအပေါ် ကြမ်းတမ်းရက်စက်သည့် ယခုလုပ်ရပ်အား ချက်ချင်း ရပ်တန့်ပြီး ဒေသခံရွာသားများအား ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များတွင် ပြန်လည် နေထိုင်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
Supreme Leader Than Shwe might be working his bottom off to convince the world that he, after killing several thousand monks and people, is actuallyatrue Buddhist but his cunning efforts seemed to have ended up in the worst possible place for any highly honoured man – the girls toilet.
On the morning of Friday 14 August, the Year9girls of No 8, State Girls’ High School, Mandalay were summoned to the hall where they were all given stern warning by the head, for sticking letters containing less than respectful writing about the country’s Supreme Leader, General Than Shwe.
“ The Royal Great Granddad “ (sarcastic way to call someone who is powerful) , “ Dog Shit” , “Hope you can still rule from your own coffin” , etc. were written on papers, then stuck on the toilet walls.
“ Oh, we got told off alright. It took the whole morning. The entire school got quite excited. Still, no one knows who did it.”
Labels: Heroes, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး The Generals
သူကသူ့ ကိုကြောက်တာဘဲအေ့ (အာဏာရှင်တို့အကြောက်ဆုံးသောမြို့ များ ၅)
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို ကြောက်တာလဲ ဟေ့ (အာဏာရှင်တို့အကြောက်ဆုံးသော မြို့ များ၎)
ကြောက်ပါတယ်လေ့ ကြောက်ပါတယ်လေ့ (အာဏာရှင်တို့အကြောက်ဆုံးသော မြို့များ ၃)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း မပြောရဟု ထုတ်ပြန်ထား
Monday, 10 August 2009 17:54 ကြည်ဝေ ဧရာဝတီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာ ဆရာမများ အားလုံးကို မည်သည့် ထင်မြင်ချက်မှ မပေးရန်နှင့် မည်သို့မှ ပြောဆိုခြင်းမပြုရန် တရားဝင် စာထုတ်ကာ တားမြစ်ထားကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ တဦးက ပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံးဝ မပြောကြဖို့ စာထုတ် သတိ ပေးထားတယ်။ ကျမတို့ ပညာရေး ဌာနတင်မကဘူး ၀န်ကြီးဌာနတိုင်းမှာ စာထုတ်သတိပေးတယ်လို့ ကြားတာပဲ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးချိန်းရှိသော နေ့များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၌ လုံခြုံရေး ထူထပ်စွာ ချထားသည့်အပြင် ဌာနအသီးသီးမှ ဆရာဆရာမများ လုံခြုံရေး ယူပေးရကြောင်းလည်း ကြားသိ ရသည်။
“ရုံးချိန်းရှိတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် မနက် ၇ နာရီ အရောက် ကျောင်းကိုလာပြီး ကင်းစောင့်ပေးရတယ်၊ ညနေ ၆ နာရီထိပဲ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေထဲက ထူးခြားမှု ရှိ၊ မရှိကိုလည်း စောင့်ကြည့်ပေးရတယ်၊ ထူးခြား ရင် ဒု - ချုပ်တွေဆီကို သတင်းပို့ရတယ်” ဟု အဆိုပါ ပါမောက္ခက ဆိုသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းများအတွင်း ဆရာဆရာမများအား လုံခြုံရေးတာဝန်ပေးကာ ကင်းစောင့်စေခြင်းကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ သံဃာအရေးအခင်းပြီး ကာလများတွင် ပိုမို တင်းကျပ်လာကာ သံသယရှိသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာရင်းအား ပါမောက္ခချုပ်မှ တဆင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ရန် မှာကြားထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးချိန်း ရက်များတွင် နည်းပညာကောလိပ် (GTC) ကျောင်းဝန်း အတွင်း၌လည်း အရပ်ဝတ်ရဲများ အများအပြား ချထားသကဲ့သို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေး ဖိုးလပြည့် အနားယူသည့် အိမ်နှင့်အနီးတ၀ိုက်တွင်လည်း အထူးလုံခြုံရေးအနေနှင့် ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲများကို တွေ့မြင်ရကြောင်း GTC ကျောင်းသားတဦးက ပြောပြသည်။
“သူ ကျောင်းတက်တာ ၂ ခါ ၃ ခါလောက်တော့ တွေ့ဖူးတယ်၊ ရုံးချိန်းရက်တွေဆို နေပြည်တော်မှာပဲ နေတယ်လို့ ကြားတာပဲ၊ တခုခုဖြစ်ရင် ရှောင်နိုင်အောင် ထင်တယ်” ဟု အဆိုပါ ကျောင်းသားက ဆိုသည်။
ရုံးချိန်းရှိသော နေ့ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အင်းစိန်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ NLD ရုံးရှိရာ ရွှေဂုံတိုင်နှင့် အနီးတ၀ိုက်၊ မြို့တော်ခန်းမ အနီးတ၀ိုက်တို့တွင် ရဲများ၊ လုံထိန်းများ၊ အရပ်ဝတ်ရဲများ၊ စွမ်းအားရှင်များ စုစုပေါင်း အင်အား ၃ ထောင်ခန့်ကို လုံခြုံရေး တာဝန်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြီးသတ် စီရင်ချက်ချမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည့် ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ညသန်းခေါင်ယံအချိန်က အင်းစိန်ထောင်ရှေ့သို့ သွားမည့် NLD လူငယ် ၂၅ ဦးခန့်ကို အာဏာပိုင် များက ဖမ်းဆီးခေါ်ယူသွားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အထဲမှ တချို့ကို သြဂုတ် လဆန်းပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှု အပြီးသတ် စီရင်ချမည့်ရက် ဖြစ်သော်လည်း သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီသို့ ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းချိန်းဆိုလိုက်သည်။
"There are 22 quarters in Insein. Each and every quarter is thick with 2000 strong security forces made up of police, local PDC, Fire forces and criminals who come straight out of prisons."
(06.08.09 Yoma 3)
Sittwe, Boothee Daung, Kyauktaw, Taungok and Thandwe , Rakhine State
Western Commander Maj-Gen Thaung Aye, has issued orders that these towns to be put under surveillance with round-the-clock report.
Rakhine, being one of the top anti-military government states, the security force that was placed in the capital city Sittwe since the 2007 Golden Colour Revolution has never been removed. (08.08.09 Narinjara)
"Posters were all over the town. They were Aung San Suu Kyi's pictures with 'Release" written underneath. "
"All the police officials were arrested, for being unaware of those posters"
"Every monastery has at least 15 security officials watching. They are also everywhere in town, especially by the gates. Anyone who comes in from Pakoku, Salin is thoroughly searched." (09.08.09 Yoma3)
The A4 leaflets, which read," Our Spirits Live On" and "Remember 06-08-88, Bago's Bloody Day" were scattered all over the town. (05.08.09 Mizzima)
Moulmain, Mudon, Thanbyu Zayat, Ye'
"It is the Rector's order : all the lecturers and tutors must watch the movement of the Uni students. Anyone who has Mon tradional outfit and in groups must be stopped. Any problem which occurs within the University estate would be the responsibility of the staff."
All the local PDC chairs in Mudon were summoned to attend the security meeting , organised by the military .
Extra security forces were positioned at the gate of Moulmein Polytechnic and also along the road to Thanbyu Zayat.
"Travellers ID cards were all checked at the gates of Moulmein and Mudon. Travellers from Ye' to Moulmein facedatoughter security check." (08.08.09 Mon news - imna)
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန် (၆.၈.၀၉ ရိုးမ ၃)
“အင်းစိန်မှာ (၂၂) ရပ်ကွက် ရှိတယ်လေ၊ လုံခြုံရေးတွေကို ရဲတို့၊ (မယက)တို့၊ မီးသတ်တို့ တခြား သတ်ဟဲ့ဖြတ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ လူမိုက်တွေပေါင်းပြီး အင်အား ၂၀၀၀ နီးပါး ရပ်ကွက်အ၀င်အထွက်တွေမှာ အကုန်ချထားတယ်ဗျ”
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ဘူးသီးတောင်၊ ကျောက်တော်၊ တောင်ကုတ်နှင့် သံတွဲ (၇.၈.၀၉ နိရဉ္စရာ)
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက် အရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သောင်းအေးမှာ အမ်းမှနေ စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိနေပြီး အဆိုပါ မြို့များ၏ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမူများကို ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး သြဂတ်စ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ တနာရီ တကြိမ်ကျ သတင်းပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်ရာတွင် နာမည်ရ ပြည်နယ် တခု ဖြစ်နေသဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အတွင်းကပင် စစ်တွေမြိ့ရှိ ဘုရားကြီး၊ လောကာနန္ဒာ စေတီနှင့် ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံတို့တွင် ချထားသော လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များကို ယခုအချိန်ထိ မရုတ်သိမ်းဘဲ ဆက်လက် ချထားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်း၊ ချောက်မြို့ (၉.၈.၀၉ ရိုးမ ၃)
"အေဖိုးဆိုဒ်အရွယ် စာရွက်ပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ လွှတ်ပါဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေ ကပ်တာ၊ မြို့ပေါ် (၇) ရပ်ကွက်လုံးမှာ ကပ်ထားတာ"
"ဒီလောက်မြို့ပေါ် (၇) ရပ်ကွက်လုံးမှာ စာကပ်တာ မသိရကောင်းလား၊ ဖမ်းမမိရကောင်းလား ဆိုပြီး အမှတ် (၁) ရဲစခန်း အချုပ်ခန်းမှာ ချုပ်ထားတယ်၊ ရဲသားအမည်ကတော့ အောင်နိုင်လို့ သိရတယ်၊ ရဲအုပ်တွေအမည်တော့ မသိဘူး"
"ညကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လုံခြုံရေး ၁၅ ယောက်စီ ချထားတယ်၊ မြို့ပေါ်မှာလည်း ချထားတာ ထူထပ်တယ်၊ ဆိပ်ဖြူဘက်အထွက်တွေမှာလည်း ဂိတ်တွေ ချထားတယ်၊ ပခုက္ကူ၊ စလင်းဘက်ကလာတယ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်၊ လိုင်စင်တွေကအစ ဒီနေ့ထိ စစ်နေတုန်းပဲ"
ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးမြို့ (၅.၈.၀၉ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန)
“၆ ရက်၊ ၈ လ၊ ၈၈။ အောက်မှာ စာပိုဒ် ၂ ပိုဒ်။ အပေါ်ပိုဒ်က ၄ ကြောင်း ရေးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ မရှိတော့ရင်တောင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝိဉာဉ်တွေက ဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာပါတဲ့။ နောက်တပိုဒ်က ၆-၈-၈၈ ပဲခူးမြေမှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ သွေးမြေကျတဲ့နေ့ကို သင်တို့ မေ့ထားနိုင်ပြီလားတဲ့။ အောက်က ၈၈ ဝိဉာဉ်များ ဆိုပြီးတော့ ရေးထားတာ တွေ့တယ်”
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ ၊ သံဖြူဇရပ် ၊ ရေး (၈.၈.၀၉ ဌာန်ပရိုင်)
“ပါချူပ်ရဲ့ ညွှန်းကြားချက်အရ ဆရာ/မတိုင်း ကျောင်းသား/သူများတွေကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ နောက်ပြီး မွန်ဝတ်စုံနဲ့ စုလိုက်ပုံလိုက်သွားလာ နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ရပ်တန့်သွားအောင် တားဆီးခိုင်းတယ်။ တကယ်လို့ ကျောင်းသားတွေက တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဆရာ/မတို့က တာဝန် ယူရမယ် ”
မုဒုံမြို့နယ်တွင် ကျေးရွားဥက္ကဋ္ဌကိုခေါ်ကာ မြို့နှင့်ကျေးရွာလုံခြုံးရေးအတွက် စစ်တပ်က အစည်းဝေးခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
မော်လမြိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းရှေ့ဂိတ်နှင့် သံဖြူဇရပ်မြို့ လမ်း တလျှောက်တွင် မြန်မာအစိုးရမှ ရဲများပိုမိုအစောင့်ချထားသည်
“မော်လမြိုင်မှ မုဒုံသွားတဲ့ ခရီသည်ပါမကျန် ဂိတ်ရောက်ရင် မှတ်ပုံတင်ပြ ခိုင်းတယ်၊ မှတ်ပုံတင်မပြနိုင်တဲ့ သူတွေက ရဲက မေးနေရောပဲ၊ ဘယ်က နေလာလဲ ဘယ်မှာနေလဲ။ တကယ်လို့ ရေးမှ မော်လမြိုင်သို့ တက်လာ တဲ့ကားဆို ဂိတ်မှာ ပိုပြီးစစ်ဆေးခံရတယ်”်